(၆၅) လွတ်လပ်ရေးမှသည် … | MoeMaKa Burmese News & Media
(၆၅) လွတ်လပ်ရေးမှသည် …
၃၂ နှစ်၊ ၅ လနဲ့၆ ရက်ထဲနော်
စိတ်၊ နှလုံး၊ ဘဝင်
ချွေး၊ သွေး၊ အသက်ရင်း
ခုချိန်တိုင်၊ (၆၅) နှစ်တိုင်ခဲ့လဲ
ဖခင်ပြုခဲ့ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ 
ခနိုးခနဲ့ လုပ်သူတွေလဲ ရှိရဲ့
အစွန်းရောက်သူတွေလဲ ရှိသနဲ့ 
ပြေးမြင် တိုင်ချင်နေပါတယ် ဖခင်။
တောင်တန်းတွေကလဲ နှင်းမြူကြားမှာ မျက်ရည်စို
တောတန်းတွေ ရိုးမြေတန်းမှာလဲ သွေးညှီလွှမ်း
နိုင်ငံရဲ့နံရံမှာ ကျည်ဆန်ကာပေါက်တွေ ဝေတုန်းပေါ့
ကျည်ဆံတွေက ပြန်စားနေတယ် ဖခင်။
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါလို့မပြောရဲခဲ့
မလွတ်လပ်ရေးနဲ့ ခရီးဆက်ခဲ့ရတာ ကြာလှပေါ့ဖခင်..။
နှစ်ဖက်လုံးအတွက် ဝမ်းနည်းနေရတဲ့ လွတ်လပ်ရေး
မမြင်နိုင်တဲ့ အဝေးဆုံးအမှတ်တနေရာမှာပါ ဖခင်..။
ညာဆဲ၊ ဝါဆဲ၊ အခါမလဲ (နှစ်ဘက်စလုံး) ။
နှောင်းလူတွေ ညံ့တယ်ပြောရင်ဖြင့် ခံရန်အသင့်
ဝေလေလေ လွတ်လပ်ရေးကြီးကို ဓာတ်ခွဲဖို့ 
စိတ်ဓာတ်အဆိုးအညစ်တွေကို လျှော်ဖွတ်ဖို့ 
ဖက်တီးအက်ဆစ်နဲ့ ဦနှောက်တွေကို ဓာတ်ပြုရဦးမယ်
(၆၅) နှစ်မှသည် …. …. …..
ဘယ်၍ ဘယ်မျှ ဘယ်ကာလ …။ ။